Love – Gentleman Magazine
လိငျအင်ျဂါစှပျကှငျးတှဟော လိငျဆကျဆံခြိနျမှာ အသုံးပွုရတဲ့ Sex Toy တဈခု ဖွဈပါတယျ။ လိငျတံရဲ့ အရငျးမှာ စှပျရတာမြိုးရှိသလို၊ ဝှေးစနှေ့ဈလုံးကိုပါ ကြျောပွီး ဆီးခုံရငျးထိ စှပျတာမြိုးတှလေညျး ရှိပါတယျ။ လိငျတံစှပျကှငျးတှကေို အသုံးပွုရတဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ လိငျဆကျဆံခြိနျမှာ အခြိနျကွာကွာပိုမိုစှမျးဆောငျနိုငျဖို့၊ သာယာမှုကို ပိုမိုခံစားရဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးနဲ့ အသုံးပွုမယျဆိုရငျ
အဆငျသငျ့မဖွဈသေးခြိနျမှာ ကိုယျဝနျရခွငျးဟာ ခဈြသူစုံတှဲ/အိမျထောငျသညျတှကွေားမှာ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ကိစ်စတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒီလို မလိုခငျြတဲ့ ကိုယျဝနျမရစဖေို့ သန်ဓတေားနညျးလမျးတှကေို စနဈတကြ အသုံးပွုဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသိမှား၊ အမှတျမှားနဲ့ သိထားတတျကွတဲ့ သန်ဓတေားခွငျးဆိုငျရာ နညျးလမျးနဲ့ ယုံတမျးစကားတှကွေောငျ့ မလိုခငျြသေးပဲ ကိုယျဝနျရနိုငျခပြေိုမြားလာစနေိုငျသလို ကနျြးမာရေးအတှကျသာမက ဘဝရှငျသနျရပျတညျမှုမှာပါ လမျးကွောငျးအတိမျးအစောငျး ဖွဈသှားစတေတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့
မိန်းကလေးများ ဖွင့်ဟ မပြောပေမယ့် သိစေချင်တဲ့ အချက်များ
မိန်းကလေးများ ဖွင့်ဟ မပြောပေမယ့် သိစေချင်တဲ့ အချက်များ (Zawgyi) မိန်းကလေးတွေမှာ ချစ်သူယောင်္ကျားလေးကို ဖွင့်မပြောပေမယ့် သိစေချင်တဲ့ အချက်တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးသား ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မြဲလေးနက်ဖို့ အသုံးဝင်နိုင်မှာပါ။ ၁။ ရည်းစားဟောင်းတွေနဲ့ မဆက်သွယ်နဲ့ အပျော်တွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တကယ်အတည်တွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေးတွေအနေနဲ့ ရည်းစားဟောင်းတွေနဲ့ လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်တာကို
Relationship ကို ထိခိုက်စေမည့် အမှားများ
Relationship ကို ထိခိုက်စေမည့် အမှားများ (Zawgyi) ချစ်သူရည်စားဆက်ဆံရေးဆိုတာ ထိလွယ်ခိုက်လွယ်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ တကယ်လို့များ လမ်းခွဲပြတ်ဆဲပြီးသွားကြပြီဆိုရင်လည်း အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျန်နေခဲ့တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ ? ငါ ဘာများ မှားသွားလို့လဲ? စသဖြင့် မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို သင့်အနေနဲ့